Home » Qormooyinka » Dhaqan Ku Gabbo, Diintana Ka Gabbo Waa Garaad Li’i.! W/Q: Ibraahim Cusmaan Afrax	Dhaqan Ku Gabbo, Diintana Ka Gabbo Waa Garaad Li’i.! W/Q: Ibraahim Cusmaan Afrax
17/05/2017	192 Views Dhaqan Ku Gabbo, Diintana Ka Gabbo Waa Garaad Li’i.
Sannadkii 2002-dii waxa soo baxay buuggii caan baxay ee Raaxada Guurka kaas oo lagu soo ban dhigey magaalada Dooxa ee waddanka Qadar, sannad ka dibna waxa lagu soo ban dhigey magaalada Muqdisho. Dhiganahaas waxa qoray Dr. Sabriye Macallin Muuse. Wax aysan Soomaalidu ka hadli jirin haddane aan laga maarmin in la bidhaamiyo ayuu kaga hadlay buugga. Anigu waxan akhriyey sannadkii 2004-tii , waa aan yaraa laakiin haddeer wuxu ii yahay macallin aanan illaawi doonin, dad badan oo ila mid ahna waa ay jiraan, qaar reero leh iyo kuwa aan wali guursan intaba. Dhowr sano ka dib waxa warbaahinta laga faafiyey doodo lagu falanqeynayey buuggaa isaga ah. Marka laga soo gudbo bulshadii soo dhaweysay, dad baa jirey aad u dhaleeceynayey qoraaga iyo wax yaabaha buugga ku qoran oo idil. Iyagoo dhaqanka Soomaaliyeed cugsanaaya ayey ku andacoonayeen “waa dhaqan-xumo soo korortay” , “xishoodka ayuu ka tagey” iyo hadallo la mid ah, halka aragtida qoraaguna ay aheyd in la helo qoys dhisan iyo guryo ay qanaaco ka jirto siiba in lagu heshiiyo laguna xasilo gogosha.
Ma arkin mana maqlin, haddii ay jirtana waa aqoon iga dhiman oo aan u baahanahay in la ii faa’ideeyo, aayad ama xaddiis diiddan sheegista iyo ka hadalka xubnaha taranka rag iyo dumar, iyadoo looga gol leeyahay aqoon iyo faa’ido nololeed. Dhaqanka Soomaaliyeed ayaa la sheegaa in uusan oggoleyn ka hadalka iyo tilmaanta xubin cawro ah oo ku taal qof bani’aadam ah lab ama dheddig. Waxa la yaab ila ah haddii ay dadkeennu ka yaqyaqsadaan arrimahaas ee ay ceeb ka tahay dhankooda, maxay ugu dhiirradaan dambiyo looga warramay qur’aanka iyo sunnaha, oo digtiintoodana la inoo caddeeyey, walibana la inoo sheegay in lagu muteysan karo naar iyo cadaab, Ilaah baan ka magan galnay’e. Dhaqaatiirtu kolka ay bukaanka ka wareysanayaan xabad (dumar) iyo xaniin (ragga) ceeb lama moodo, sababtoo ah xal baa ku jira, baaritaanka lagu qod-qodayo xubnaha aynu cowrada u naqaanna waa la mid. Sheeg-sheegistoodu waxay qofka ka dhigtaa ama ku dartaa kuwo la yiraahdo “ma xishoodayaal!” waase sida ay tahay’e qiil u yeeli maayo xumaan laga digey laguna sheegay kitaabka qur’aanka ah. Waxaba aynu illowsannahay wax yaalo ka weyn oo agteenna caadi ka ah.
Arrimahan waxa igu dhaliyey inan ka hadlo, habeen aan dheereyn baan barteyda Facebook ku soo qoray tix si kaftan ah aan u curiyey oo aan ka turjumeynin qiso dhab ah balse mala’awaal aheyd. Sababtii ay ku timi baan rabaa inan yar sharraxo’e, aniga iyo niman saaxiib nahay oo la yiraahdo Warsame Shiidley baa isla fadhinnay goob lagu shaaho; dabadeed isagoo curinaaya maanso uu ugu magac daray Quman, sifo guudna ka bixinaaya gabadha xubneheeda ayaan ku iri “meerisyo caajib ah oo sawiraaya qaabka ay gabadhu u taal ayaan kuu hayaa Warsamoow’e ku dar.” Kolkaasuu iigu jawaabay “maxay yihiin toloow?” waxan ku iri:
“naasahan la qabanee
Soow riyo kumaan qaban!” Markuu maqlayba qosol buu la raftay, dabcan kaftan beey iga aheyd, daqiiqado ka dibna waxan soo galiyey boggeyga gaarka ah. Dad badan baa ka aragti dhiibtay waana ay mahadsan yihiin, qaarkood si gaar ah ayeey farriimo kulkulul iyo kuwo kaftan ah iila wadaageen, qaar kalena qeybta faallo-bixinta ayey aragtiyo qallafsan iigu soo qoreen. Waxan daba-gal ku sammeeyey kuwii aanu jaalka ku aheyn Facebook ee aragtidoodu aheyd “war xishoo” iyo “xishood daranaa!” waxaan maqli jirey “Maroodigu takarta saaran ma arkee, ta kan kale saaran buu arkaa.” Mid baa ugu darnaa oo wuxu ijaafeynayaa qof muslin ah, Soomaali ahoo ku dhaqan ah. Mid baa wadaajisey muuqaal af-lagaaddo ah oo qolo ku wajahan, hadde waa qabiil dhan. Midna waan arkay wax uu ka hadlo iyo qaab uu uga hadlo intuu waayey, siyaasadda faraha la galay oo rabitaankiisa ku xukumay hoggaamiyeyaasha haatan majaraha u haya siyaasadda dalka. Dhammaan wax yaalahaasi waxay ku biyo-shubanayaan xan, haa waa xantii leynooga digey ee qur’aanka iyo sunnaha ku soo aroortay. Aayadda 12-aad ee ku jirta suuradda Xujuraat ama Laa Tuqaddim ee leh:
Macneheeduna yahay “ha is xamanina” wuxu nabigeenna Muxammad naxariis iyo nabad-galyo korkiisa ha ahaatee uu ku fasirey:
Haddii aan af-Soomaaliyeynana wuxu macnuhu noqonayaa ‘’Walaalkaa wuxuu diiddan yahay inaad ku sheegto waa xan.’’ Waxan la yaabay dhaqanka aan ku gabbaneyno ee banneynaya in dad la xanto ama wax iska fududba ka dhigayaba. Waxan soo xusuustay mahmaah ay curisey Eleanor Roosevelt oo aheyd xaaska madaxweynihii 32-aad ee Mareykanka Franklin D. Roosevelt. Waxay tiri “Great minds always discuss on ideas; average minds always discuss on events; small minds always discuss on people.” Oo macneheedu noqonayo “Garaadka weyni wuxu ka doodaa fikradaha; kan meel dhaxaadka ahina wuxu faaqidaa dhacdooyinka; halka garaadka ama maskaxda yari ay ka dooddo dadka.”
Waxan hubaa haddii aan dhowr qof meel ugu tago oo aan soo hadal-qaado ruux maqan, halkaana aan ku lafo-gurno qofnimadiisa, dhaqamadiisa, waxa uu galo iyo wuxuu gudoba, oo aan xumaantiisa falkiyo waa la iga koobinayaa oo cid “yac” iga leh ma jirto. Haddiise aan tusaale ahaan ka warramo gabadha aan doonayo inan nolosha la wadaago oo aan sifeeyo, anigoo tilmaamaya laga soo billaabo tinta ilaa iyo ciribta oo aan ka tegin cijiba (ciddi) Allaha ka dhigee, waa lagu kala yaacayaa goobta, waxaba dhaceysa in leygu tilmaamo ruux aan ceebta ka xishoon. Soomaaliyeey, naas iyo xubno kaleba haddaan sheego anigu ku muteysan maayo cadaab iyo naare, xanta iyo dambiyada aad yareysaneysaan haku waynina aakhiradiinna.
© Ibraahiim Cismaan Afrax
Previous: FIIRSO Sawiro: Beellaha Hawiye oo shir looga hadlayo maqaamka Caasimadda maanta Muqdisho ku qabtay
Next: Dadkii ugu tirada badnaa oo berrito Muqdisho isugu imanaya